Waxaa la sheegay in 400 oo kintal oo hadhuudh ah ay ururka araguxisada ee Shene ka qabsadeen magaalada Anger Gut ee Bariga Welega - ዜና ከምንጩ
Waxaa la sheegay in 400 oo kintal oo hadhuudh ah ay ururka araguxisada ee Shene ka qabsadeen magaalada Anger Gut ee Bariga Welega
Magaalada Anger Guten ee ka tirsan degmada Limu ee gobolka Bariga Welega ee deegaanka Oromada ayaa ururka argagixisada ee Shene oo golaha shacabka ay ku dhawaaqeen in uu yihiin Argagixiso waxa ay la wareegeen 400 oo kintal oo raashin ah oo ay wateen dadka barakacayaasha ah.
Sida ay sheegayaan ilo-wareedyo ku sugan Addis Ababa, December 11, 2014,
dadka deggan lix tuulo oo ka tirsan tuulada Anger Gut ayaa bililiqeystay raashinkii ay wateen, una daabuleen magaalada nabada ah ee anger Gut.
Dadka cabanaya ayaa u sheegay New Morning in kooxda Shane , oo ku andacoonaysa in ay ka baxeen aagga, ay isticmaaleen farqiga u dhexeeya si ay raashin uga soo qaadaan tuulada si ay uga baxaan.
Dhibanayaasha ayaa sheegay in 400 oo kintaal oo Raashin ah oo Barakacayaal ah ay siday 60 Baqlo ah lagala wareegay markii uu soo gaaray Magaalada Caroye.
Mid ka mid ah dadka cabashada soo gudbiyay oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa yiri.
Ninku waxa uu intaa ku daray in ka dib markii ay soo dejiyeen hadhuudh ay geeyeen bakhaar ku yaala Guten, markii aanu gurigayaga ka soo baxnayna aanu kala wareegnay wax aanu ku nidhi waa cunto.
Laakiin aaway dawladii?
Waxaa intaa dheer, in kastoo aan qeylinaynay in ka badan hal sano, haddana maleeshiyaadku kama aysan joojin dilka iyo dhaca (laga bilaabo qoraalkan malinti la qoray).
Dad badan oo shacab ah oo doonayay inay degaan kale u guuraan ayaa ka cawday in la afduubtay oo la dilay.
War cusub oo aanu ka soo xigannay wargeyska New Morning, ayaa sheegay in ay kooxda argagixisada ee shane ahi la wareegeen badar, maadaama ay xadeen.
Arintaan ayaa dadka ka faalooda arimahaasi waxa ay xuseen in qaar ka mid ah dadkii horay uga soo baxay guryahoodii si ay naftooda u badbaadiyaan ay kooxdu qafaashay xili ay dib ugu laabteen deegaankooda iyagoo wata raashiin.
Labo todobaad ka hor, waxaa la dhacay gaari xamuul ah oo siday 200 oo kintal oo hadhuudh ah, in ka badan 30 qof iyo 30 baqal ayay kooxda argagixisada ee shane qafaasheen.
Dadka ka faalooda arrimahan ayaa sidoo kale sheegaya in kooxda argagixisada ee shane ah ay dileen labo qof ka hor inta aysan dhacin badarkaasi mana jirto cid ka badbaadisay dhac ka dhacay deegaanka.
Dadka cabanayey waa nala dilayaa yaanan guryaheenna u joogin.
Waxaan isku daynay inaan gaadhno meel nabad ah laakiin waanu heli waynay.
Waxa kale oo ay yidhaahdaan waxa nalaga qaaday xoriyadii aan hantideenna ku cuni lahayn oo gaajo ayaan joogi la nahay.
Waxa uu intaa ku daray in aan wali ka war sugno xalkii dowladda oo aan ka quusan, loona baahan yahay in dowladdu si deg deg ah gacan uga geysato.
Sida ay sheegayaan wararka saaka laga helayo magaalada Addis Ababa ciidamada gaarka ah ee dowlad deegaanka Oromada ee ku sugan deegaanka Andode ayaa u suurtagashay in ay joojiyaan weerarada ay ku hayaan dadka shacabka ah.
Subixii ayay wacdeen taliyaha bilayska deegaanka tariku Tarbaba si ay ugu jawaaban, balse way diideen inay taleefoonka qabtaan.
Waxaa xusid mudan in subaxnimadii 24-kii November 2014 isla degmadaas lagu dilay 19-qof oo shacab ah, laguna afduubtay 20-shaqaale ah.
Total views : 7536863